warkii.com » Shaxda Adag Ee Manchester United Kula Ciyaari Doono West Ham Iyo Xiddigaha Uu Solskjaer Ku Ciqaabi Doono Qaladkii Ay Sameeyeen
Shaxda Adag Ee Manchester United Kula Ciyaari Doono West Ham Iyo Xiddigaha Uu Solskjaer Ku Ciqaabi Doono Qaladkii Ay Sameeyeen
Manchester United waxay Arbacada martigelinaysaa West Ham iyadoo aan wali kasoo kabanin niyad-jabkii kasoo gaadhay guul-darradii semi-finalka FA Cup ee ay Chelsea kaga soo cidhib-tirtay 3-1 Axaddii toddobaadkan.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa dareenkiisa usoo jeediyey labada ciyaarood ee ugu hadhay horyaalka Premier League iyadoo ay Red Devils ku jirto kaalinta shanaad, waxay se haystaan fursad ay afarta sare kaga mid noqon karayaan haddii ay ka badiyaan West Ham iyo Leicester City oo toddobaadka dambe ay dagaalka ugu weyn wada geli doonaan.
Goolhaye David de Gea oo laba qalad oo uu sameeyey ay sababeen labadii gool ee hore ee Chelsea ka dhalisay, waxay taageereyaasha Manchester United dalbadeen in kaydka loo diro, waxaana la saadaalinayaa in labada ciyaarood ee hadhayba uu tababare Ole Gunnar Solskjaer ku ciqaabi doono qaladaadka uu sameeyey.
Laakiin macallinka reer Norway oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray goolhayaha reer Spain, una sheegay in laga doonayo in boqolkiiba boqol uu badbaadiyo kubbadaha u yimaadda,
Si ay uga faa’iidaystaan guul-darradii Leicester City kasoo gaadhay Tottenham oo 3-0 ku garaacday, waxa Ole Gunnar Solskjaer la filayaa in shaxdiisa ugu adag uu kusoo bilaabo ciyaartan, isla markaana uu meesha ka saaro laacibiintii liitay ee kulankii Chelsea ku fashilmay.
Paul Pogba oo kaydka kusoo bilowday ciyaartaas ayaa hoggaamin doona khadka dhexe iyadoo ay iska garab halgami doonaan Bruno Fernandes, halka weerarkana ay Anthony Martial iyo Mason Greenwood iman doonaan iyadoo midkoodna uu ciyaartaas fadhiyey qaybtii hore kan kalena uu gebi ahaanba kaydka ku jiray.
Brandon Willisama oo Axaddii ciyaaray ayaa la saadaalinayaa in laga soo hormarin doono Timothy Fosu-Mensah oo uu ka garab ciyaari doono Harry Maguire, Lendolof iyo Wan-Bissaka.
Shaxda suurtogalka ah ee Manchester United kula ciyaari doonto West Ham